iMac ပန်ကာများကိုဆော့ဝဲလ်ဖြင့်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ ငါက Mac ပါ
iMac ပန်ကာများကို software မှဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ
Pedro Rodas | | iMac, Mac ကွန်ပျူတာများ
အသုံးပြုသူများစွာသည်ပါးလွှာသောမော်ဒယ်လ်သစ်များဖြစ်ဖြစ်၊ ထူထဲနေသောအလူမီနီယံ iMac နှင့် DVD burner ဖြစ်စေသူတို့၏ iMac ၏အတွင်းပိုင်း hard drive ကိုဖယ်ထုတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ သို့သော် လိုက်နာရမည့်အဆင့်အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိပါ နှင့် iMac ၏မော်ဒယ်များတွင်အာရုံခံကိရိယာများတပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းစက်သည်သင့်တော်သောအပူချိန်ကိုထိန်းထားရန်ပန်ကာများကိုမှန်ကန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်စေရန်ပရိုဆက်ဆာသို့ဒေတာပို့ပေးသည့်အာရုံခံကိရိယာများရှိသည်။
Apple သည်အစအ ဦး ၌ iMac ရှိသူများကို iMac တွင်ပါ ၀ င်သည့် hard drives များ၏ထိပ်၌တပ်ဆင်ထားသောအပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများကိုပေးခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင် hard drive ကိုပြောင်းလဲလိုက်လျှင် Apple ကိုယ်တိုင်စုဆောင်းထားသည့်မော်ဒယ်များထက်အခြားမော်ဒယ်တစ်ခုအတွက် ပန်ကာများကိုကွန်ပျူတာကအလိုအလျောက်ဖွင့်သည်။
အသစ်က၏ရောက်ရှိနှင့်အတူနောက်ပိုင်းတွင် iMac Retina display ပါသောမော်ဒယ်များကိုမရောက်မှီအကြိမ်ပေါင်းများစွာအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးသားသောအစွန်းပါးသောကြောင့်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာကိုထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိသေးပါ၊ ထို့ကြောင့်ဤကွန်ပျူတာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်နိုင်ပြီ ပန်ကာများနှင့်ပြproblemsနာမရှိဘဲအတွင်းပိုင်း hard disk ကို HHD တစ်ခုသို့မဟုတ် SSD တစ်ခုကဖြစ်စေ။
အကယ်၍ သင်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရရှိရန်ဥပမာအားဖြင့် SSD တစ်ခုနှင့်မွမ်းမံလိုသော iMac လျှင်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များမှာ - ပရိသတ်တွေကို software ကနေထိန်းချုပ်ရမယ် discs တွေငါတို့ပြောခဲ့တဲ့အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာတွေနဲ့မထောက်ပံ့တော့တာကြောင့်အဲဒါတွေကိုရှာရတာခက်တယ်။
Hard disk ကိုပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့ iMac ကိုသင်စဖွင့်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးလုပ်ရမှာကလိုအပ်တဲ့ application အတွက် Internet ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဒါကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပူချိန်အာရုံခံကိရိယာကဲ့သို့ hard disk manager ရှိသည်။ ဒီ application ကို SSD Fan Control လို့ခေါ်တယ် ပြီးတော့မင်းလုပ်နိုင်တယ် အောက်ပါ website မှအခမဲ့ download လုပ်ပါ.
ဒေါင်းလုပ်ချပြီးတာနဲ့သင်လုပ်ရမယ့်အရာကထည့်သွင်းပြီးပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖွင့်သောအခါ၊ SMART အလုပ်လုပ်တဲ့စနစ် iMac ကိုဖွင့်သည့် အချိန်မှစ၍ ပရိသတ်များအားအလိုအလျောက်စတင်ရန်အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်သင်၏ Mac ၏ပရိတ်သတ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဆော့ (ဖ်) ဝဲထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးမည်သည့် third party hard drive ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » iMac ပန်ကာများကို software မှဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ
Matias Torchia ဟုသူကပြောသည်
ssd ပါ ၀ င်သော iMac 2011 တွင်အကောင်းဆုံးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုသည်မှာသေချာသည်။ ၎င်းသည်ဇိမ်ခံကားဖြစ်သည်။ MacOS Sierra ကိုအထောက်အပံ့ပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
Matias Torchia အားစာပြန်ပါ
သေချာတာပေါ့၊ အဲဒါကိုကျွန်တော့် iMac 2011 မှာ SSD နဲ့သုံးတာပိုကောင်းပါတယ်။ Sierra ကိုအထောက်အပံ့ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် !!
မင်္ဂလာနေ့လည်စာ Pedro ။ သင်ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလားသိချင်ပါတယ် Hard Drive ကို SSD ပြောင်းသည့်အချိန်မှ ၂၀၀၉ iMac တွင်ပရိတ်သတ်များကရပ်တန့်ခြင်းမရှိ။
operating system သည် SIERRA ဖြစ်သည်
ငါပြသနာကသင်မှတ်ချက်ပေးသည့် SMART ရွေးစရာမပေါ်လာပါ၊ ၎င်းသည်ပရိုဂရမ်၏ဓာတ်ပုံတွင်လည်းပါ ၀ င်သည်။
မင်္ဂလာပါဖာနန်ဒို၊ ဘယ်လိုထွက်လာလဲ၊ ဒီစာမျက်နှာကိုတရားဝင်စာမျက်နှာမှကူးယူလိုက်ပြီလား။
ဟယ်လိုပက်ဒရို, ငါ SSD ကိုအဘို့အ HDD ကိုပြောင်းလဲပြီ, နှင့်ပရိသတ်များအသံကျယ်ကျယ်၏သင်တန်း၏, ငါ SSD ကို FAN ထိန်းချုပ်မှုကို install လုပ်ထားကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်ငါကဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုသတိမထားမိပါဘူး, ပရိသတ်များ, ရှိသမျှဆေးလုံးကိုလိုက်နာ, ငါတို့လျှောက်လွှာ၏ DISPLAY ။ STOP ပြောင်းလဲခြင်း) ။ ကျွန်ုပ်သည် 2011 ခုနှစ်၏ BMI နှင့် OS HIGH SIERRA ရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်သလဲ။
JOSE MARIA သို့ပြန်ပြောပါ
Hard Drive ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောသူများအတွက်အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာ။ IMac 27 2010 ၂၀၁၀ နှစ်လယ်ပိုင်းနှင့် High Sierra တွင်ပြီးပြည့်စုံသော (smart mode) အလုပ်လုပ်သည်။
Luis Alberto Leiva ကိုပြန်ပြောပါ
Pedro Rodas အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ် SSD Fan Control ကို link မှတိုက်ရိုက်ကူးယူပြီး၎င်းသည်အောင်မြင်ပါသည်။ ငါ့ထံမှယူဆောင်လာတဲ့ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုသင်မသိဘူး။
iPhone ၏ကန ဦး ပုံစံတွင် 32GB သိုလှောင်မှုပမာဏရှိသည်
ကျွန်ုပ်၏ Mac တွင် RAM ဘယ်လောက်လိုအပ်ပါသလဲ။